Ndi Turtles rutere n'ụsọ oké osimiri nke Catalonia n'ihi mgbanwe ihu igwe | Network Meteorology
Turtles rutere n'ụsọ oké osimiri nke Catalonia n'ihi mgbanwe ihu igwe
Mmiri na-arịwanye elu nke mmiri n'ihi mgbanwe ihu igwe na okpomoku ụwa na-eme ka ọtụtụ ụdị na-akwagharị ma ọ bụ gbanwee usoro akwụ ha. E nwekwara ụdị ndị ọzọ na-agbanwe ebe obibi ha iji mee ka ndụ ha ka mma.
N'okwu a, Temperaturesdị mmiri na-arịwanye elu nke mmiri nke oké osimiri na-adọtakwu ọtụtụ nke mbekwu mmiri. Speciesdị a nọ n'ihe egwu nke mkpochapu ma na-aga n'ụsọ oké osimiri nke Calatuña akwụ. A hụbeghị nke a kemgbe ọtụtụ afọ, mana ọ na-arịwanye elu.
Mụ mbe na akwụ n’akụkụ mmiri
Eziokwu ahụ bụ na nduru na-aga n'ụsọ oké osimiri nke Catalonia nwere ike ime ka ọgba aghara dị iche iche ma ọ bụ na ndị na-asa ahụ na-emetụta ha na usoro akwụ ha. Generalitat gwara ndị niile na-asa ahụ ka ha ghara inye ụmụ anụmanụ nsogbu, na mgbe ha hụrụ otu n'ime ha, gwa ha. Kemgbe 1972 enweela nnwale iri site na nduru ndị a akwụ n’akụkụ n’ụsọ osimiri Catalonia na, karịa ihe niile, na-adịbeghị anya.
Mmetụta nke ụmụ mmadụ na -emepụta na mmepe nke turtles a na-akpata naanị ọkara n'ime ha ka ọ na-eme nke ọma. Nkera nke ọzọ anaghị adị ndụ n'ihi aka mmadụ.
N'oge ọkọchị a, ndị ọrụ ntanetị na-atụ anya karịa mbịlọ osisi loggerhead (Kuru Kuru) gaa Catalan n'ụsọ oké osimiri, ebe ha abịaghị mgbe ụsọ oké osimiri a dị oyi karịa ụdị a na-achọ akwụ. Ruo ugbu a, osimiri ndị dị na Gris na Turkey, nke dị n’ebe ọwụwa anyanwụ Mediterenian, bụ ebe kachasị mma maka ụdị a mgbe ọ na-abịa ịzụlite n’ime Europe.
Iji belata mmetụta ndị mmadụ bi na mbe a, Generalitat ebidola mkpọsa amamịghe nke na-akọwa usoro ị ga - agbaso mgbe ị zutere mbe. N'ụzọ dị otú a, a na-anwa ịghara igbochi mmeputakwa ha nke na-eme n'etiti June na September.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Turtles rutere n'ụsọ oké osimiri nke Catalonia n'ihi mgbanwe ihu igwe
Oge ọkọchị na-amalite na Spain na ọdọ mmiri na 53% ikike
Oge ice ikpeazụ na otu ụmụ mmadụ siri rute America